Miarahaba ireo mpampiasa Android, miverina indray izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahafinaritra ho anareo rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe X Icon Changer Pro Apk. Izy io dia fampiharana Android Personalization, izay manolotra hampitombo ny tsiambaratelon'ny mpampiasa amin'ny fampiharana hafa. Izy io dia manolotra ny hanova ny kisary lehibe amin'ny fampiharana rehetra ary hanova ny anarana.
Izay mpampiasa Smartphone, fantaro fa ny data rehetra ao amin'ny Smartphone dia manandanja foana. Matetika, ny fiarovana ny teny miafina dia misy amin'ny fitaovana rehetra, saingy misy olona vitsivitsy miaraka aminy mila mizara ny passcode-nao. Io dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny fitaovanao tsy misy alalana, fa samy manana ny zavatra tsy tiany zaraina ny tsirairay.
Ka ahoana no ahafahanao misoroka izany? Ny valin'io fanontaniana io dia eo amin'ny pejy. Tsy mila karazana rafitra fiarovana avo na karazana locker ianao. Mila fotsiny ity rindranasa ity ianao, amin'ny alalanao no ahafahanao manao adaladala ny rehetra amin'ny fampiasana ity app ity. Tsy maninona ny fizaranao ny teny miafinao amin'ny olona marobe satria amin'ity fampiharana ity dia tsy misy mahita ny data-nao.
Amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia afaka manao fanamboarana tsara indrindra amin'ny fitaovana Android ianao. Izy io dia manome fahafahana hanova ny logos lehibe indrindra amin'ny fampiharana hafa. Misy endri-javatra mahagaga an-taonany maro ao amin'ity fampiharana ity, azonao ampiasaina sy hampitomboana ny fiainanao manokana. Noho izany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao, dia mijanòna kely miaraka aminay ary mankafy izany.
Topimaso momba ny X Icon Changer Pro Apk
Izy io dia fampiharana Android Personalization, izay manolotra ny mpampiasa hanova ny kisary lehibe amin'ny fampiharana hafa. Ao amin'ny dikan-teny ofisialy dia tsy maintsy mandoa serivisy sasany amin'ity fampiharana ity ianao, saingy fantatrao fa nitondra fampiharana maimaim-poana ho anao izahay. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny kinova mod, izay manome fidirana maimaim-poana amin'ny endri-javatra rehetra.
Izy io dia manome endri-javatra mahavariana namboarina, izay misy logos. Izy io dia manolotra logos samihafa, izay azonao isafidianana araka ny safidinao. Manolotra fizarana sasany izy io, izay manolotra logo samihafa araka ny kisary lehibe. Izy io dia manolotra fizarana misaraka toy ny fakantsary, fampiharana surf amin'ny Internet, fifandraisana ary lalao.
Amin'ireto sokajy ireto dia misy logo maro samihafa misy, izay azonao apetraka amin'ny rindranasa hafa. Azonao atao koa ny manamboatra ny sarinao manokana amin'ny sary famantarana ary mampiasa azy io ho toy ny kisary. Manome anao hanitsy ny sarinao izy ary hampiditra azy ho sary famantarana.
Hiseho ao amin'ity app ity ihany koa ny logon'ny fampiharana Android-nao rehetra, izay azonao ampiasaina sy apetraka amin'ny fampiharana hafa. Io no fomba tsotra indrindra hahatonga ny namanao hadalana. X Icon Changer Mod Apk koa dia manome ny mpampiasa hanova ny anaran'ny fampiharana novaina kisary.
Manome trano fivarotana efa niorina aza izy io, izay manolotra ny fanangonana kisary farany. Azonao atao ny misintona fonosana famantarana rehetra avy amin'ny fivarotana ary apetraho amin'ny fampiharana hafa. Misy endri-javatra mahavariana taonina azonao atao amin'ny fampiharana ity. Noho izany, sintomy izany ary atombohy ny fanaingoana.
anarana X Icon Changer Pro
Anaran'ny fonosana io.hexman.xiconchanger
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.1 ary ny
Misy fomba samihafa, izay manome ny mpampiasa hifehy ny fitaovana Android. Izy io no fampiharana tsara indrindra hanamboarana ireo fampiharana Android anao. Ny sasany amin'ireo fiasa dia hita ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa hizara ny sasany amin'ny lisitra eto ambany izahay. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Fanangonana kisary tsara indrindra
Mora ny manova
Ovao ny anaran'ny fampiharana
Tsipika tsy misy rano
Ny dikan-teny ofisialy dia mora hita, fa eto izahay miaraka amin'ny dikan-teny mod. Noho izany, tsy hita eny an-tsena. Aza manahy fa hizara ity fampiharana ity aminareo rehetra izahay. Azonao atao ny misintona ity fampiharana ity amin'ity pejy ity. Mila mitady ny bokotra fampidinana izay hita eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ity pejy ity ianao. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fampidinana.
X Icon Changer Pro Apk no fomba tsara indrindra hanamboarana ny fitaovana Android anao. Izy io koa dia fomba tsara hanatsarana ny tsiambaratelo amin'ny fampiharana hafa. Raha mbola manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fizarana hevitra.
Sokajy Apps, Personalization Tags X Icon Changer Mod Apk, X Icon Changer Pro, X Icon Changer Pro Apk Post Fikarohana